ko htike's prosaic collection: စစ်ကျွန်ဘ၀ မရောက်ချင်သူမှန်သမျှ သံရုံးမှာ ကန့်ကွက်မဲကို သွားထည့်ကြ
စင်္ကာပူရှိ မြန်မာသံရုံးမှ ၁၀.၄.၂၀၀၈ ရက်စွဲဖြင့် သံမှူး လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော၊ အခြေခံ ဥပဒေမှုကြမ်း အတည်ပြုရေးအတွက် ဆန္ဒမဲပေးရန် ဖိတ်ကြားခြင်း ဆိုသော မိတ္တူစာများကို စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင် နေထိုင်သော မြန်မာလူမျိုးများ၏ အိမ်သို့ စာတိုက်မှ တဆင့်ပေးပို့ထားသည်ကို ၁၄.၄.၂၀၀၈ နေ့က လက်ခံရရှိကြောင်း မိတ်ဆွေများမှတဆင့် ကြားသိရပါသည်။ ထိုသံရုံးမှ ပို့လိုက်သော ဖိတ်ကြားစာမှာ စင်္ကာပူရှိ မြန်မာလူမျိုးတချို့ လက်ခံရရှိခြင်း မရှိပါ။ အဘယ်ကြောင့် မြန်မာလူမျိုးတရပ်လုံးနှင့် သက်ဆိုင်သော ကိစ္စကို လူနည်းစုသာ သိရှိနိုင်ရန်ံ လုပ်ထားခြင်းမှာ သဘာဝ သိပ်မကျဟု မြင်သည်။ စစ်အစိုးရဘက်မှ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံကို ထောက်ခံမဲ ရရှိအောင် ကန့်ကွက်မဲပေးရန် မလွန်ဆန်ဝံ့သည့် လူများဆီသို့သာ ၄င်းဖိတ်ကြားစာများ ပေးပို့ခြင်းပေလော…။ တွေးစရာများက အများအပြား။ ဒီလောက်အရေးကြီးသည့် ကိစ္စမျိုးကို သံရုံးမှ ပြီး၊ပြီးရော မလုပ်သင့်ပေ။ သူတို့လုပ်လျှင်လည်း ကျွန်တော်တို့ဘက်မှ ငြိမ်ခံ လက်ပိုက်ကြည့်မနေသင့်ပေ။ စုံစမ်းရမည်၊ မေးမြန်းရမည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ မြန်မာလူမျိုးအားလုံး အလုပ်သမား၊ ကျောင်းသား၊ ရဟန်းသံဃာ လူတန်းစားအားလုံး အသက်၁၈နှစ် ပြည့်ပြီးသူ မှန်သမျှ သံရုံးတွင် တရားဝင် မဲပေးခွင့်ရှိကြောင်း သိအောင် လုပ်ပေးရမည်မှာ ကျွန်တော်တို့၏ တာဝန်တခုဖြစ်သည်။ ဖိတ်ကြားစာထဲတွင် ဧပြီ ၂၅၊ ၂၆၊ ၂၇၊ ၂၈ နှင့် ၂၉ရက်များတွင် လာရောက်၍ မဲပေးနိုင်ကြောင်း ကြေငြာထားသော်လည်း ကျွန်တော့်အနေနှင့် အကြံပေး လိုသည်မှာ ၂၅၊ ၂၆၊ ၂၈၊ ၂၉ နေ့များတွင် လုံးဝမဲသွားမပေးဘဲ၊ လူအများစုသွားနိုင်မည့် တနင်္ဂနွေနေ့ ၂၇.၀၄.၂၀၀၈ ကို Polling Day အဖြစ်သတ်မှတ်၍ စင်္ကာပူရှိ၊ မြန်မာလူမျိုးအားလုံး စုစုစည်းစည်း သွားရောက် မဲပေးကြစေ လိုပါသည်။ မဲပေးရမည့် အချိန်မှာ နံနက် ၉နာရီ မှ ညနေ ၅နာရီ အထိ ဖြစ်သဖြင့်၊ ထိုအချိန်ကာလအတွင်း မည်သည့်အချိန်မဆို သွားရောက်မဲပေးနိုင်ပါသည်။
ကိုယ့်တိ်ုင်းပြည်၊ ကိုယ့်လူမျိုးကို ကယ်တင်ချင်သူမှန်သမျှ၊ ကိုယ့်တိ်ုင်းပြည်၊ ကိုယ့်လူမျိုးကို ချစ်မြတ်နိူးသူမှန်သမျှ၊ စစ်ကျွန်ဘ၀ မရောက်ချင်သူမှန်သမျှ ၂၇.၄.၂၀၀၈နေ့တွင်၊ သံရုံးမှာ ကန့်ကွက်မဲကို သွားထည့်ကြပါ။ စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ အလုပ်သမား အင်အားစုများကိုလည်း မေတ္တာရပ်ခံ ပန်ကြားလိုသည်မှာ “ငါသွားထည့်လို့ရော ဘာဖြစ်လာမှာ မို့လည်း” ဆိုသော အတွေးများကို ဖယ်ရှားပြီး၊ ယခုလို အချိန်မျိုးမှာ ကိုယ့်ဆန္ဒအမှန်ကို ထုတ်ဖော်ပြီး မြန်မာပြည်သူပြည်သားများ စစ်ကျွန်ဘ၀မှ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ကန့်ကွက်မဲလေးတချပ်ဖြင့် ၀ိုင်းဝန်းကူညီ အားဖြည့်စေလိုပါသည်။ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများမှလည်း စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ မြန်မာအလုပ်သမားထု၊ ကျောင်သားထု အားလုံးအား၊ စစ်အစိုးရ ရေးဆွဲသော ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေ၏ ဆိုးကျိုးများကို သိနားလည်အောင် ရှင်းပြ၍ ဤသို့ကြောင့် ကန့်ကွက်မဲပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးစည်းရုံး လုပ်ရှားမှုများ အလျင်အမြန် လုပ်သင့်ကြပေပြီ။
နိဂုံးချုပ်အဖြစ် ပြောလိုသည်မှာ ရှေ့လာမည့် တနင်္ဂနွေ ၂၇.၄.၂၀၀၈ ကို စင်္ကာပူရှိ မြန်မာလူမျိုးများ၏ မဲဆန္ဒပေးသည့်နေ့ ဟု သတ်မှတ်၍ စည်းစည်းလုံးလုံး တညီတညွှတ်တည်း သံရုံးသို့ ကန့်ကွက်မဲ သွားထည့်ကြပါ၊ ကိုယ့်နိုင်ငံ၊ ကိုယ့်လူမျိုးကို ရောက်တဲ့နေရာမှာ ရတဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ ကယ်တင်ကြပါ။ မြန်မာနိုင်ငံ အမြန်ဆုံး လွတ်မြောက်ရန် ရည်သန်လျှက်……….
Posted by ကိုထိုက် at 12:48
What should we do if all of our voting "No" become cheated to "Yes"??? I am worry.
16 April 2008 at 17:13
重車論壇摩尼網bbs社區月光論壇momokoko同學會視訊小魔女免費影片mobile01 論壇自拍情色論壇情色自拍貼圖免費視訊聊天室台灣成人交友甜心寶貝淫片區迷你窩miniworld彩虹頻道a片下載米克綜合論壇megarotic a片下載聊天室交友思源中文網McyZone大眾論壇mcyzone成人論壇美女圖片區中部聊天室做愛 影片 自拍網愛聊天室080聊天王朝苗栗人聊天室女人色色網免費小遊戲區柔情聊天網真愛love777聊天室辣妺視訊免費影音美女寄情築園小遊戲av博物館0800a片網情色電影長片下載咆哮小老鼠影片分享區免費 視訊台灣成人電影視訊真實做愛影片分享live173美女視訊免費網免費視訊美女影音失落的世界聊天免費a片試看la論壇免費aa片試看ktzone 論壇s383線上娛樂場kk272視訊俱樂部台灣kiss情色文學區情色貼圖區天天幹情色貼圖天堂情色網貼影片區台灣kiss文學區奇集集kijiji屏東夜語聊天室台灣情色網日韓情色寫真日本av女優色色網jojo熱情領域jojo 漫畫連載捷克論壇禁地論壇